﻿	လွယ်ကူသော Quiche စာရွက် - ချက်ပြုတ်နည်းများ
copeland ၏ဟင်းနုနွယ်ရွက်နှင့် artichoke သို့ကျဆင်းလာစာရွက်
လွယ်ကူသော Quiche စာရွက်
ဒါ လွယ်ကူသော Quiche စာရွက် အစက်အပြောက်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော်လည်းမည်သူမျှမသိရှိရသေးပါ။ ဝက်ပေါင်ခြောက်၊ ဒိန်ခဲနှင့်စိမ်းလန်းသောကြက်သွန်နီများပါရှိပြီးမနက်စာသို့မဟုတ်ညစာအတွက်အလွန်လွယ်ကူပါသည်။
အခြားလွယ်ကူသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ မတူညီသောဒိန်ခဲများနှင့်ရာသီဥတု - သင်လွယ်ကူသော quiche စာရွက်ကိုသင်အမှန်တကယ်ထည့်နိုင်သည်။ သို့သော်ဝက်ပေါင်ခြောက်နှင့်ဒိန်ခဲသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုအကြောင်းကိုမသိရပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါတို့ချစ်ကြတယ် ဥ ဒီမှာနေ့၏မည်သည့်မုန့်ညက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နံနက်စာ၊ နေ့လည်စာ၊ ညစာအတွက်ပျော်မွေ့ရန်ဆင်ခြေတစ်ခုယူမည်။ ဤလွယ်ကူသော quiche စာရွက်သည်သုံးခုစလုံးအကြားကွာဟချက်ကိုပေါင်းကူးပေးသည်။ ငါသည်ငါ့ quiche ချက်ပြုတ်နည်းများလွယ်ကူသောစောင့်ရှောက်ခြင်း, ချစ်စရာကောင်းတဲ့နှင့်အတူသူတို့ကိုတက်အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ကြိုက်တယ် သစ်သီး ဒါမှမဟုတ်လှပတဲ့လတ်ဆတ်တဲ့ အသုပ် !
သငျသညျငါတို့သကဲ့သို့ဥကြိုက်ကိုချစ်လျှင်သင်လည်းဤကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည် ဘေကွန်နှင့်အတူတစ်ညအိပ်စက်ခြင်းနံနက်စာ ဒါမှမဟုတ်ဒီ မက္ကဆီကန်နှေးကွေးသောထမင်းချက်နံနက်စာ
အဲဒီမှာအမျိုးမျိုးသောကွဲပြားခြားနားသောဂန္ quiche စာရွက်ပေါ်တွင်မူကား, ဒါပေမယ့်ငါအမှုအရာစူပါရိုးရှင်းသောဤအချိန်န်းကျင်ချင်တယ်။ ကျနော်တို့ကကြိုတင်အအေး pie အပေါ်ယံလွှာနှင့်အတူစတင်အပေါင်းတို့နှင့်ကောင်းသောပစ္စည်းပစ္စယတွေနဲ့ဖြည့်ပါတယ်!
သငျသညျဤ quiche ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်လိုလျှင်, တစ်ခါသုံးဒယ်အိုးထဲသို့နှိပ်ထားပြီးဖြစ်သော premade, အေးစက်နေတဲ့ပိုင်အပေါ်ယံလွှာကိုသုံးနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်ငါသတ္တုတွင်းထွက်လှိမ့်ခြင်းနှင့်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ပိုင်ပြား၏တ ဦး တည်းအတွက်ဖုတ်ရန်ကြိုက်တယ်။ အဲဒီနည်းနဲ့ငါတို့ဖြတ်လိုက်တဲ့ဖြတ်လမ်းတွေအကြောင်းဘယ်သူမှမသိဘူး။
ဘယ်မှာဒိန်ခဲ fondue ရောနှောဝယ်ယူရန်
ဤလွယ်ကူသော Quiche စာရွက်လုပ်နည်းသိကောင်းစရာများ -
ဒီစာရွက်ကပိုလွယ်ကူလိမ့်မည်မဟုတ် - တစ် ဦး နှင့်အတူစတင်ပါ ပိုင်အပေါ်ယံလွှာ preade နှင့်၎င်းကိုသင်အကြိုက်ဆုံးအရာများ၊ ကြက်ဥနှင့်နို့များဖြင့်ဖြည့်ပါ။
သင်တွေ့လိမ့်မည်သည့်ချက်ပြုတ်နည်းများအမြောက်အများသည်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသောပါဝင်ပစ္စည်းများရှိပြီးအပိုဒယ်အိုးအပြင်ထပ်ဆောင်းကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအချိန်လိုအပ်သည်။ ကြှနျုပျတို့မှာ ချက်ပြုတ်, Cube ဝက်ပေါင်ခြောက်နှင့်အစိမ်းရောင်ကြက်သွန်နီကိုအသုံးပြု ဒီလွယ်ကူသောနံနက်စာ quiche စာရွက်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်အတူတကွသေချာစေရန်ဤစာရွက်တွင်!
ကိတ်မုန့်အဖြစ်ချက်ပြုတ်အပေါ်မျက်စိစောင့်ရှောက်ရန်မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့် - သင်ကြက်ဥချက်ပြုတ်သကဲ့သို့သင်တို့အပေါ်ယံလွှာထိပ်ပေါ်မှာအလွန်အညိုရောင်လာချင်ကြဘူး! လိုအပ်ခဲ့လျှင်, အပေါ်ယံလွှာ၏အပြင်ဘက်လက်စွပ်ကိုဖုံးလွှမ်း နောက်ထပ်အညိုရောင်ကနေကာကွယ်တားဆီးဖို့သတ္တုပါးအနည်းငယ်နှင့်အတူ။
သငျသညျရိုးရာပိုင်အပေါ်ယံလွှာ၏ပရိတ်သတ်မဟုတ်လျှင်, တစ် ဦး အောင်ကြိုးစားပါ Puff Pastry Quiche ဒါမှမဟုတ်ဒီ လွယ်ကူသော Mini Mini wonton ထုပ်နှင့်အတူလုပ်!
သင်လောင်း! မုန့်ဖုတ်ပြီးတာနဲ့ထုံးစံအတိုင်း ၂ နာရီအထိအေးဆေးပြီးအအေးခံပါ။ အပူပေးရန်အတွက်, သစ်သီးဖျော်ရည်ကိုသတ္တုပါးဖြင့်ဖုံးအုပ်။ 325F (အပူမရောက်မှီတိုင်အောင်) တွင်ဖုတ်ရမည်။ ရေခဲသေတ္တာမတိုင်မီအအေးခံခြင်းသည်အပေါ်ယံလွှာကိုအနည်းငယ်ပိုမိုကြည်လင်စေသည်။
သင်တစ် ဦး crustless Quiche ဘယ်လိုလုပ်သလဲ:
သင်ဟာ gluten-free အစားထိုးရွေးချယ်မှုကိုရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင် (သို့) သင်ဟာအပေါ်ယံလွှာရဲ့ကြီးမားတဲ့ပန်ကာမဟုတ်သေးလျှင် (ဟေး၊ ငါတို့အားလုံးမှာကိုယ်ပိုင်အကြိုက်တွေရှိတယ်။ ) သင်ကအပေါ်ယံကိုကျော်လွန်ပြီးကြက်ဥအရောအနှောကိုпрямоထဲသို့ထည့်နိုင်သည်။ ဒီဟာကို crustless quiche စာရွက်အဖြစ်လုပ်ရန် pan ။ ဒါလွယ်ကူပါတယ်!
သငျသညျအလှအပ၏လက္ခဏာများအဘို့အအပေါ်ယံလွှာကိုကြည့်ဖို့မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ကတည်းကကြက်ဥလုံးဝဗဟိုမှတဆင့်အားလုံးသတ်မှတ်ထားသည်အထိသင်ရုံတစ် ဦး crustless quiche ဖုတ်ရမည်။
Sausage နှင့်အတူအိပ်စက်အနားယူပါမည် casserole - တစ် ဦး လက်ကိုဆင်းမိသားစုအကြိုက်ဆုံး!
ဘလူးဘယ်ရီမုန့်ညက် Oatmeal - ကျန်းမာသန်စွမ်းသောချိုမြိန်သည့်ရွေးစရာ
ငှက်ပျောသီးနံနက်စာကွတ်ကီးများ - သွားလာရင်းနံနက်စာအတွက်
Overnight ရေခဲသေတ္တာ Oatmeal
ငှက်ပျောသီးအခွံ Crunch Muffins - mmmm, muffins !!
ပြင်ဆင်ချိန်ဆယ့်ငါး မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်၃၅ မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်ငါးဆယ် မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၆ စားသုံးခြင်း စာရေးသူအက်ရှလေဖာ ဤလွယ်ကူသော Quiche စာရွက်သည်ပိုင်ဆိုင်သောပိုင်အပေါ်ယံလွှာဖြင့်စတင်သော်လည်းမည်သူမျှမသိရ။ ဝက်ပေါင်ခြောက်၊ ဒိန်ခဲနှင့်ကြက်သွန်အစိမ်းများပါရှိပြီးမနက်စာသို့မဟုတ်ညစာအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အခြားလွယ်ကူသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ မတူညီသောဒိန်ခဲများ၊
▢¾ ခွက် နို့ သို့မဟုတ်မုန့်
▢¼ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ငရုတ်ကောင်း
▢တစ်ခု ခွက် ဝက်ပေါင်ခြောက် ကုန်တယ်
▢1 ½ ခွက် ဖျက်စီးထားသောဒိန်ခဲ ခွာ
▢၃ ဇွန်း ကြက်သွန်အစိမ်း
375 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှမီးဖို Preheat ။
pie အပေါ်ယံလွှာကို unroll နှင့်9'ပိုင်ပန်းကန်ထဲသို့နှိပ်, ဆန္ဒရှိလျှင်အပေါ်ဆုံးအနား crimping ။
ကြီးမားသောပန်းကန်လုံးတွင်ကြက်ဥ၊ နို့၊ ဆားနှင့်ငရုတ်ကောင်းတို့ကိုအတူတကွဆုပ်ကိုင်ပါ။
ဝက်ပေါင်ခြောက်၊ ဒိန်ခဲ ၁ ခွက်နှင့်အစိမ်းရောင်ကြက်သွန်များကိုဖြန်းပြီးကြက်ဥအရောအုံကိုထိပ်အုပ်အပေါ်သို့လောင်းပါ။ ကျန်သည့်½ခွက်ဒိန်ခဲကိုကြက်ဥအရောအုံပေါ်တွင်ဖြန်းပါ။
အလယ်ဗဟိုကိုအပြည့်အဝမပြီးမချင်း ၃၅ မှ ၄၀ မိနစ်ဖုတ်ရမည်။ အစာမစားခင် ၅-၁၀ မိနစ်ခန့်အေးအောင်ထားပါ။
သော့ချက်စာလုံးလွယ်ကူသော quiche စာရွက် သင်တန်းမနက်စာ ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုကော်ပီကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝပိတ်ပင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။
ရှေ့တွင်ဥ Muffins လုပ်ပါ